Farmaajo Xaq ma u leeyahay inuu¢ ka hadlo 26ka June, waajibse ma ku tahay inuu barto taariikhda Somaliland ? - somalilandlivemedia
Farmaajo Xaq ma u leeyahay inuu¢ ka hadlo 26ka June, waajibse ma ku tahay inuu barto taariikhda Somaliland ?
22:45 2. July 2017
Waxaan filayaa in dad badani ay daawadeen xafladdii 26-ka June lagu qabtay Aqalka dowladda Hoose ee Muqdisho oo ahayd munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 57-aad ee ka soo wareegtay maalintii Somaliland xoriyadda ka qaateen maxmiyaddii ingiriiska, xafladdaas oo aniga iigu muuqatay Dhalanteed iyo RIWAAYAD la jilayey oo looga dan lahaa keliya sheegasho inay Somaliland ka mid tahay Federaalka Somalia.
Haddaba Farmaajo ayaa goobtaa ka soo jeediyey khudbad uu waraaq ka akriyayey oo ay u soo malmalluuqeen rag aan aqoon durgusan u lahayn taariikhdii halgankii xorriyadda Somaliland. Walow Farmaajo uu tahli kari waayey inuu si fiican u kiciyo magacyada haldoorkii u soo kifaaxay madaxbannaanida Somaliland oo sidii qof Ajanebi ah uu u higgadinayey (oo aad mooddo GUDH-DHUU).
Dhacdadani waxay i soo xusuusisay taariikhdii 1980kii AASKII QARAN ee loo sameeyay Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal (AHN), iyo wixii kala qabsaday Abwaan Ali Sugulle Cigaal ” Dun-carbeed” (AHN) iyo Siyaad Barre.
Siyaad Barre ayuun baa damcay in uu xabaasha dusheedii ka khudbadeeyo,
Cali Sugulle ayuun baa ciil is hayn kari waayey oo yidhi “ukaadi ukaadi Madaxweyne Muuse Galaal maad aqoonne, ninkaad taqaan baa laga khudbadeeyaaye kan anaa aqaan oo ka khudbadaynaye’e!”. Dabadeed Abawaan Cali Sugulle intuu Siyaad Barre is agtaagay ayuu tiriyey Gabaygii caanka noqday, oo haddii aan tuduc ka mid ah soo qaato wuxu yidhi
“Goldalooladeennii kuwii, kula gufeyn waayey
Ee nolosha kugu gabay ayaa, taagan goonyaha
Markaad guurtay bay leeyihiin, ina galaalow”.
Haddaba waxay ahayd ninkan AKAAKADA ah ee Cabdi Xaashi (gudoomiyaha Maqaar Saarka ah ee qalka Sare ee Somalia) inuu Farmaajo ku yidhaahdo “waar ka baydh adigu 26ka June ma taqaanide, 1da July ka khudbadee anigaa tan ka khudbadeynaye”e. Xiniinyo la isma dhibaadsho, ragga ka soojeeda Somaliland ee u shaqa tegay Somalia waa rag bahdii laga saaray oo dadnimo iyo damiirba aan lahayn.
Waxa ay ila tahay in Farmaajo aanu xaq u lahayn ka hadalka halgankii Xorriyaddoonka Somaliland, taariikhdaana aanay waajib-ba ku ahayn inuu barto iyo inuu ka sheekeeyo, balse doorka keliya ee uga bannaanaani ay tahay keliya in uu HAMBALYO u diro Shacbiga iyo dawladda Somaliland si la mid ah sida uu u tahniyadeeyo 27ka June ee Xorriyadda Dalka Djabouti.
Halkan Ka Daaawo Ciyaar yahankii Ugu Horeeyay Ee Soomaali Ah Ee Ka Mid Noqda Ciyaartoyda Koobka Adduunka
Guddoomiye Cabdiqaadir Jirde oo Ka Hadlay Xukunka Lagu Ridey Siyaasiyiinta WADDANI Video
Cali khaliif Galadh oo kahadlay Hadalo dayl Qaaf ah Saleebaan Gaal kasooyeedahy
DAAWO:-MADAXWAYNE SIILAANYO OO MAANTA SHIR DEG-DEG AH ISKUGU YEEDHAY GOLAHIISA WASIIRADDA IYO NUXURKA QODOBADA LAGAGA HADLAY
Tartankii Qu’raanka Kariimka Ahaa Ee Gobolada Somaliland Oo La Soo Gunaanaday Iyo Togdheer Oo Ku Guuleystay Video
Newer PostBoobe Yuusuf Ducaale oo mar kale ka hadlay Xuska 1 July iyo Khaladaadka khudbaddii Farmaajo
Older Post ALLE HA U NAXAARIISTE WAXAA BURCO AAS QARAN LOOGU SAMIYEY MARXUUN MIJIR QAADI MAX’UD+TAARIKHDIISA